Global Voices teny Malagasy » Tsy mitsaha-mitombo ny fanakatsakanana ataon’ny miaramila any Madagasikara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Mey 2009 14:40 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika Lila
Sokajy: Madagasikara, Ady & Fifandirana, Politika
Raha tsy mitsaha-mitombo manerana an'i Madagasikara ny tsy fankasitrahana ny governemanta vaovao kanefa sakanan'ny miaramila izany, dia miasa mafy kosa ireo mpikambana ao amin'ity governemanta ity manazava ny fandehan-javatra rehetra nahatongavan'izy ireo teo amin'ny fitondrana amin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena. Ny fiovan-kevitra tampoka teo amin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny HCC (Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana) ny amin'ny maha-ara-dalàna ny famindrana fahefana no sarangotin'ny governemanta tetezamita ary nahatonga ny fisamborana ny lehiben'ny mpiambina ity andrim-panjakana ity.
Solon-tena avy ao amin'ny Firenena Mikambana momba ny filaminana sy ny Firaisam-be Afrikana no namorona ny atao hoe “Madagascar Contact Group” tany Addis Ababa mba hanome antoka fa ny firenena maro dia mampiaram-peo ny amin'ny tokony hiverenana amin'ny lalàm-panorenana. Milaza ny antoko politika tsirairay avy fa nanana solontena tamin'izany fivoriana izany, kanefa tsy nanatrika izany kosa ny antoko mpanohitra.
Nandritra izany rehetra izany dia nanendry praiministra vaovao ny filoha teo aloha Ravalomanana, izay mialokaloka any Afrika Atsimo, dia i Manandafy Rakotonirina ary handrafitra governemanta vaovao, izay mifandrirotra amin'ny maha ara-dalàna ny governemanta tetezamita. Andro vitsivitsy taty aoriana dia nanendry ireo mpikambana tao amin'ny kabinetrany Andriamatoa Rakotonirina, ary nosamborin'ny miaramila izy sy ireo olona mpanara-dia azy noho ny “fanosoran-tena ho praiministra, fanakorontanana ary fitazonana fitaovam-piadiana”.
Avy hatrany dia naneho ny heviny tamin'iny fisamborana iny ny mpitoraka bilaogy Malagasy:
Rakotonirina nosamborin'ny Commandant Andrianasoavina via andrydago.wordpress.com
Ilay mpitoraka bilaogy, andrydago no nandefa sary sy nilaza ny fandehan-javatra tamin'ny nisamborana an-dRakotonirina Manandafy amin'ny antsipiriany ary manontany tena raha iny fisamborana iny no hampijanona ny fihetsiketsehana.
Avylavitra nandefa sary mihetsika mitahiry ny fisamborana tao amin'ny bilaoginy :
Jentilisa kosa no manoritsoritra ny zava-nitranga rehetra tao amin'ilay sary mihetsika:
Manamarina iny fisamborana iny ny governemanta tetezamita ary nilaza fa i Manandafy dia enjehina satria nitonon-tena ho praiministra tsy ara-dalàna, nandranitra fanimbana fananana ary nitazona fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna.
Ny sary mihetsika nalaina ny andro manaraka iny tao amin'ny toerana nitazonana an-dRakotonirina no mampiseho fa mangana ny tarehiny.
Iny fotoana fisamborana nataon'ny miaramila iny dia tsy nijanona tamin'ny fanraraotana fampiasana hery ihany akory. Mpitoraka bilaogy maro no nilaza fa nahita olona nirongo fitaovam-piadiana nihaodihaody manodidina ny toerana nanaovana ny fisamborana, nandeha 4×4 ary nanao tifi-danitra hampitahorana ireo mpandalo. Nandefa sary maromaro i Solofo, sary mampiseho fiara iray misy olona milanja basy mamoaka ny lohany ety ivelan'ny fitaratra manaraka fiara iray feno miaramila mirongo fitaovam-piadiana.
I  Vola kosa ao amin'ny fanamarihana nataony, no nanoratra fa nanazava ny anton'ny fahafatesana olona 2 mpanao fihetsiketsehana ny lehiben'ny tafika:
Nidona tamin'ny fiara izy ireo nandritra ny fifanjevoana. Nampihomehy iny filazana nataon'i Noel Rakotondrasana iny. Henoy ny filazan'ny RFI any amin'ny farany.
Fanararaotam-pahefana hafa koa no nataon'ny miaramila tamin'ny nisamborana an-dRazily. Razily ilay tovolahy iray nitondra ny sainam-pirenena namakivaky irery ny andiana miaramila ary nosamborina niaraka tamin'ny saina nentiny. Mampahatsiahy antsika ny tantaran-dRazily i Ethan Zuckerman. Misy fanangona-tsonia natao hangatahana ny miaramila hijery akaiky ny momba an-dRazily ary hanafaingana ny fotoam-pitsarana azy. Efa nahavory sonia vitsivitsy izy ity ary efa aparitak'ireo mpikirakira twitter:
Ireo mpikirakira twitter miresaka ny momba an-dRazily
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/07/2163/